आज साउने संक्रान्ति पर्व ! - Himalayan Kangaroo
आज साउने संक्रान्ति पर्व !
Posted by Himalayan Kangaroo | १ श्रावण २०७४, आईतवार ०४:५१ |
काठमाडौं । आज साउने संक्रान्ति पर्व । साउने संक्रान्तिदेखि सूर्य कर्कट रेखामा सर्ने भएकाले यस दिनलाई कर्कट संक्रान्ति पनि भनिन्छ । कर्कट संक्रान्तिबाट सूर्य दक्षिणायन हुने हुँदा पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा हिउँदेयाम शुरु हुन्छ ।
अयन परिवर्तन हुने साउने संक्रान्तिका दिन घर घरमा कागती,निउवा,अम्बा,अनार,नासपाती,साउनेआरु चढाएर कण्डारक राक्षसको पूजा गर्नाले चर्मरोग नलाग्ने विश्वास छ । यसै दिन साँझ कण्डारकको पूजा गरी लुतो फाल्ने चलन छ । लुतो फाल्दा कुकुरडाइनो, कागभलायो,कुरिलो पानीसरो पुरेनी,गलेनी,लुतेलहरोलगायतका वर्षे वनस्पतिको धूप हाली लुतो लैजा भन्दै घरबाट चारैतिर अगुल्ठो फाल्ने गरिन्छ ।
लुतो फालेपछि भोपिल्ट राँके लाग्छ भनेर खेतबारीमा काम नगर्ने र हल बार्ने चलन छ । असारभरि खेती लगाउने भारी काम गरेर थाकेका किसानहरु साउने संक्रान्तिका दिन हिलो मैलो पखाली आफन्तजनलाई समेत निम्ता गरी भोज खाने गर्दछन् । यसलाई मैजारो भन्ने गरिन्छ । साउने संक्रान्तिकै दिन थारु समुदायमा गुरिया पर्व मनाइन्छ भने सुदूरपश्चिमको बैतडीमा गुजर बनारसी मेला लाग्दछ ।
Previousरामेछापमा बाढीले बगाउँदा २ को मृत्यु, ३ बेपत्ता
Nextबच्चाको तौल जन्मिदै ७ किलो भन्दा बढी !
जनकपुरमा विवाह महोत्सव मनाईंदै
१ पुष २०७२, बुधबार ०१:५०
गाँजर अनियमित महिनावारी देखि उच्च रक्तचाप सम्मको लागि औषधि
१७ बैशाख २०७५, सोमबार ०६:५३
३० चैत्र २०७४, शुक्रबार ०२:४८